ENgilani: Abazalwana noodade bamkela ngobubele iindwendwe ezize kwindibano yezizwe ngezizwe
ABEMI 743 421 605
ABAVAKALISI 1 614 244
IZIFUNDO ZEBHAYIBHILE 842 091
Ndandiba UliNgqina Kanti Uza Kuba Sisifundo SeBhayibhile
Indibano yezizwe ngezizwe eyayiseLondon, eNgilani, yayisisihlandlo esichulumancisayo kwiindwendwe nakumaNgqina asekuhlaleni. UAndrew noElizabeth baya kwihotele yaseLondon, beyokubona iindwendwe ezivela kwamanye amazwe. UElizabeth wabona ibhinqa elinxibe kakuhle waza wacinga ukuba lingomnye wezo ndwendwe. Walibulisa ngobubele, waliwola. Eli bhinqa ladideka, ngoko uElizabeth waxolisa esithi: “Uxolo, bendicinga ukuba ungomnye weendwendwe!”
Eli bhinqa labuza, “Iindwendwe zaphi?”
UElizabeth walibonisa umbhalo owawukwindawo yokwamkela iindwendwe ehotele owawusamkela amaNgqina kaYehova yaye wothuswa yinto elayithethayo. Lathi: “Yho ndayithanda ke leyo. Ndikhangeleka ngathi ndililo na?”
Njengoko babencokola, eli bhinqa lamxelela ukuba linguVivien, lisuka eNigeria, kodwa ngoku lihlala kufuphi nalapho ahlala khona. UVivien wavuma ukuqhutyelwa isifundo seBhayibhile yaye wayefuna nabantwana bakhe babekho. UAndrew noElizabeth baya kwaVivien, yaye ngabo ngoku abamkelwa ngobubele, bawolwa. UVivien wakuvuyela kakhulu ukudibana kwabo ngebhaqo kumbindi waseLondon. Bambonisa incwadi ethi Okufundiswa YiBhayibhile, bamangaliswa xa befumanisa ukuba sele enayo yaye ebeyifunda kunye nabantwana bakhe abane. Xa bamxelela ukuba baza kumqhubela isifundo seBhayibhile sasimahla ngaloo ncwadi, evuya wathi, “Masiqale ngoku!”
Ileta Evela Kumzalwana oliRoma
NgoNovemba 2014, kwabakho ibandla lokuqala lesiRomany eSlovakia. Kwindibano ephelileyo, kuye kwabhaptizwa abavakalisi abathetha isiRomany abayi-21, bonke bengabelali enye. Babeyi-495 abantu abakwibandla lesiRomany abezayo kwiSikhumbuzo. Omnye wabazalwana owabhaptizwa apho wabhala wathi:
ESlovakia: Abavakalisi ababini bashumayela ngoBukumkani kwibhinqa eliliRoma
“NdiliRoma laseŽehra, eSlovakia. Apho ndihlala khona, abantu abamhlophe bacinga ukuba siziiGypsy, singcolile, siyaxoka yaye singamasela. Xa ndandifuna ukungena ecaweni, umgcini wecawa wandixelela ukuba andamkelekanga apho, mandihambe. Unokuyicingela indlela endabajonga ngayo abantu abamhlophe emva koko. AmaNgqina kaYehova andimemela kwiHolo yoBukumkani. Ndaya ndinexhala, ndilindele ukuphoxeka kwakhona. Ndothuka xa ndaxhawulwa ngumntu omhlophe waza wandamkela ngobubele ngaphambi kokuba ndingene. Zange ndikwazi nokumamela intetho yesidlangalala. Inye nje into endandiyicinga, ‘Kwenzeka njani ukuba wonke umntu abe nobubele kum?’
“Zange buhle ubuthongo ngobo busuku, ndandicinga ngoko kwakwenzeke kwiHolo yoBukumkani. Ngoko ndaphinda ndaya, ndiyokhangela ukuba ububele ababenabo babungeyonto yaloo mini na. Ngolu suku babenobubele ngakumbi, kwakungathi kudala ndingumhlobo wabo. Zange ndiyeke ukuya ezintlanganisweni ndade ndabhaptizwa. Abazalwana baqhubeka benobubele nasemva kokuba ndibhaptiziwe yaye bayandixabisa. Ngamanye amaxesha bandipha ukutya okubhetele kunoko bakutyayo bona! Ndifuna ukuhlala ndikule ntlangano, ndikhonza uYehova uThixo ngonaphakade.”
Umthandazo Wokushumayela Uyaphendulwa
Udade onguAysel wahamba ngebhasi esuka kwidolophu yaseGanja esiya eBaku, eseAzerbaijan. Wathandaza kuYehova, emxelela ukuba unqwenela ukuncokola nomntu ngeBhayibhile endleleni eya apho. Nangona wayenesitulo amele ahlale kuso kuloo bhasi, elinye ibhinqa lamcela ukuba ahlale nalo. Wancokola nalo yaye ekugqibeleni wakwazi ukuyijikela eBhayibhileni loo ncoko. Lamchazela ukuba liyamthanda uYesu yaye lifuna ukumazi ngakumbi. Banikana iinombolo zefowuni baza balungiselela ukuba baphinde bancokole. Lamcela ukuba aliphathele iBhayibhile xa eyokulibona.
Emva kokuba ebuyele eGanja, uAysel watyelela elo bhinqa linomdla apho lalisebenza khona. Lamxelela ukuba linencwadi yemithandazo eliyifunda yonke imihla. Lo dade wothuka xa kwathi kanti loo ncwadi yayiyincwadana ethi Ukuhlolisisa IZibhalo Imihla Ngemihla ka-2013! Kwaqaliswa isifundo seBhayibhile, yaye uAysel wavuya kakhulu kuba uYehova eye wamnika isibindi sokuba ashumayele ngokungacwangciswanga.
Ileta Yombulelo Evela Kwibanjwa
Ileta evela eSpeyin:
“Ndithanda ukuqala ngokunibulela ngemigudu eniyenzayo yokufikelela lonke uhlobo lwabantu ngoko iBhayibhile ikuthethayo.
“Ndaqala ukudibana namaNgqina kaYehova kwiminyaka eyi-15 eyadlulayo eTiranë, eAlbania. Ndamangaliswa leli Ngqina linesibindi sokuza kuthetha nathi, kuba sasiliqela lemigulukudu eselula elishumi. Ekubeni sasinezixhobo, akukho mntu wayecinga nokucinga ukuza kuthetha nathi, kodwa yena lo mzalwana weza. Engenadyudyu, wathetha nathi ngeBhayibhile. Ndakuthanda ukuba nesibindi kwakhe.
“Kwiminyaka emine edluleyo ndafikelwa liNgqina apha entolongweni eSpeyin, licela ukundiqhubela isifundo seBhayibhile. Ndavuma, ukususela ngoko ndiye ndatshintsha ndangumntu obhetele. Ndiyekile ukuba nobundlobongela nokuba nomsindo. Ndagqibela kudala ukungena engxakini. Ndiye ndamazi uYehova yaye oko kundenze ndanenjongo ebomini. Ndizama ukuphilisana ngoxolo nabantu endikunye nabo, yaye ngoku sekungaphezu konyaka ndingumvakalisi ongabhaptizwanga.
“Nangona sele iyiminyaka eyi-12 ndisentolongweni, kule minyaka iyi-4 idlulileyo ndiye ndaba novuyo noxolo lwengqondo, zinto ezo endingazange ndibe nazo ngaphambili. Ndimbulela qho uYehova.
“Kwezi veki zidlulileyo ndiye ndabukela iividiyo kwi-jw.org/xh. Ividiyo eyayithetha ngomzalwana owayesentolongweni eMerika yandichukumisa ngokwenene. Andingomntu unkenenkene, kodwa xa ndabona indlela awabutshintsha ngayo ubomi bakhe, zathi waxa iinyembezi.
“Akwaba uYehova angaqhubeka eyisikelela imigudu yenu yokufikelela bonke abantu ngokuguqulela iindaba ezilungileyo ngeelwimi ezininzi nokuya kwabo bakwiintolongo ezigcina eyona migulukudu.
“Ekugqibeleni Ndinoxolo Lwengqondo”
UFelicity waseSweden oneminyaka eyi-68 uthi: “Ndandiziva ndingento, ndiphila nje, ndikhangela ulonwabo kodwa ndandingade ndilufumane.” Engonelisekanga ziinkolelo zakhe zobuKatolika, waqalisa ukukhangela ukuba zikholelwa ntoni ezinye iinkonzo waza waligqwirha, evumisa nokuvumisa.
Ngenxa yokungayifumani injongo yobomi, waphelelwa lithemba yaye wayefuna ukuzibulala. “Ndilila ndathetha noThixo ngokuvakalayo ndimcela andixelele ukuba ufuna ndenze ntoni. Kwiiveki ezimbini emva koko, kwankqonkqozwa emnyango. Inkwenkwana eyayincumile yandibuza ukuba ndinganomdla na wokuva oko kuseLizwini likaThixo. Ndithethela ngaphakathi ndathi, ‘Owu, yhini Thixo, kaloku bendingathethi le nto. Yhu, amaNgqina kaYehova?’”
Into eyafika kuqala engqondweni yakhe kukuba avale umnyango, kodwa waphela emamela waza wavuma ukufundelwa iBhayibhile ngencwadi ethi Okufundiswa YiBhayibhile. Uthi: “Ndenziwa ndayibona ngenye indlela iBhayibhile.” UFelicity wabhaptizwa kwindibano yengingqi ka-2014 eyayiseSweden. Ngoku uthi: “Le yinto ebendiyifuna ubomi bam bonke. Ekugqibeleni ndinoxolo lwengqondo.”